မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မသန်စွမ်းပညာသင်ဆု 2021/2022 Application Portal Update - လက်ရှိကျောင်းသတင်း
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မသန်စွမ်းပညာသင်ဆု - ဤပညာသင်ဆုသည်မသန်စွမ်းသူများအားကူညီရန်ရည်ရွယ်သည့်ပညာသင်ဆုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်မသန်မစွမ်းမှုပုံစံတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ရှိနေပါကဤအချက်အလက်ကိုအလေးအနက်ထားသင့်သည်။ ဒီမိုက်ကရိုဆော့ဖ်မသန်စွမ်းပညာသင်ဆုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။ ယုံပါ၊.
အဆိုပါ မိုက်ကရိုဆော့ဖမသန်စွမ်းပညာသင်ဆု မိုက်ခရိုဆော့၏မစ်ရှင်တစ်ခုကယ်တင်။ ဤရွေ့ကားမစ်ရှင်သည်မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းအရင်းအမြစ်အုပ်စုတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့ကမသန်စွမ်းသူများကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ဒီပညာသင်ဆုနိုင်ပါတယ် အထက်တန်းကျောင်း မသန်စွမ်းသောကျောင်းသားများသည်ကောလိပ်တက်ရန်နှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်တွင်အလုပ်ရှာရန်ရည်ရွယ်သည်။
ထို့အပြင်အဆင့်မြင့်ပညာရေးတွင်မသန်စွမ်းသူများနေထိုင်သည့်လူ ဦး ရေတိုးပွားလာစေရန်ကူညီရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်နှင့်, ရေရှည်၌, လျော့နည်းသွားသည် အလုပ်လက်မဲ့မှု ဒီလူ ဦး ရေအချိုးအစားအဘို့ဘက်လိုက်မှု။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မသန်စွမ်းပညာသင်ဆုကိုအလားအလာရှိသောအထက်တန်းကျောင်းသားများအားချီးမြှင့်မည်။ သို့သျောလညျးသူတို့ကအသက်မွေးမှုသို့မဟုတ်ပညာရေးကောလိပ်တက်ရောက်ရန်စီစဉ်ထားရပေမည်။ ဒါ့အပြင်ဘဏ္needာရေးလိုအပ်ချက်ရှိရမည်။
Microsoft မသန်စွမ်း Scholarship Worth / အကျိုးခံစားခွင့်
ဒီပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပမာဏ ပညာတတ် ချီးမြှင့်ခံရဖို့တစ်နှစ်လျှင် $ 5,000 ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ အထိရှိသည်။
ဒါ့အပြင်ဒီငွေပမာဏကိုဆီယက်တဲလ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှပေးဆောင်သည်။ ၎င်းသည် Microsoft ရှိမသန်စွမ်းသော Employee Resource Group (ERG) ကိုယ်စားဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလက်ခံသူ၏ကျောင်း၏ဘဏ္Aာရေးအထောက်အပံ့ရုံးသို့ပြုလုပ်သည်။
Microsoft မသန်စွမ်းပညာသင်ဆုအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်, သင်:
မသန်မစွမ်းနှင့်အတူလက်ရှိအထက်တန်းကျောင်းအကြီးတန်းဖြစ်။ သို့ရာတွင်သတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းဖြစ်သည် WHO က။ သို့သော်မသန်စွမ်းမှုသည်အမြင်အာရုံ၊ အကြားအာရုံ၊ လှုပ်ရှားမှု၊ သိမြင်မှု၊
ဒါ့အပြင်တစ်ဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်ကိုတက်ရောက်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဒါက ၂ နှစ် ၄ နှစ်တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်ဒါမှမဟုတ်နည်းပညာကောလိပ်မှာပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အထက်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးသည့်ပညာသင်နှစ်၏ကျဆုံးခြင်းတွင်ဖြစ်သင့်သည်။
ထို့အပြင်လျှောက်ထားသည့်ကျောင်းသည်ယူအက်စ်အေတွင်ရှိရမည်။ သို့မဟုတ်ဘဏ္transactionsာရေးအရောင်းအဝယ်များအတွက်ယူအက်စ် - Affiliate ရှိတယ် သို့သော်အသေးစိတ်အတွက်၊ သင်အမေရိကန်နိုင်ငံမဟုတ်သည့်ကျောင်းများ၏အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုကိုအတည်ပြုရန်ဆီယက်တဲလ်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်အင်ဂျင်နီယာ၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်ကွန်ပျူတာသတင်းအချက်အလက်စနစ်များတွင်အတည်ပြုထားသောအဓိကဘာသာကိုကြေငြာပါ။ ဒါ့အပြင်ဥပဒေ, စီးပွားရေး, ဒါမှမဟုတ်ဆက်စပ်လယ်ပြင်၌. ဥပမာအားဖြင့်, မသန်မစွမ်း, Pre- ဥပဒေ, ဘဏ္financeာရေး, စီးပွားရေးအုပ်ချုပ်မှု, ဒါမှမဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။
ထို့အပြင်ကျောင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ရပ်ရွာလူထုတွင်ခေါင်းဆောင်မှုကိုပြသပါ။
ထို့အပြင်အထက်တန်းကျောင်းတူညီသော GPA ၃.၀ နှင့်အထက်ရှိသည်။
ဒါ့အပြင်ကျောင်းအပ် status ကိုအချိန်ပြည့်သို့မဟုတ်တစ်ဝက်အချိန်ဖြစ်ရမည်။
Microsoft မသန်စွမ်းမှုအတွက်လျှောက်ထားရန် ပညာတတ်, မှတ်ချက်။ အောက်ပါပစ္စည်းများကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]:
အကျဉ်းချုပ်ဖြေ - သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွင်အောက်ပါအချက်အလက်များပါ ၀ င်သင့်သည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ။ ဒါ့အပြင်သင်ရရှိခဲ့သည့်ဂုဏ်ထူးနှင့်ဆု။ သို့သော်ဖြစ်နိုင်လျှင်နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သောဆုများပါ ၀ င်သည်။ နှင့်အလုပ်အတွေ့အကြုံ
မှတ်တမ်း။ လက်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်း၏တရား ၀ င်မဟုတ်သောမိတ္တူတစ်စောင်ကိုထည့်သွင်းပါ။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်ပါကမှတ်သားပါ။ လျှောက်ထားသူသည် Seattle ဖောင်ဒေးရှင်းအားတရားဝင်ဗားရှင်းများပေးရန်လိုအပ်သည်။
စာစီစာကုံးသုံးခု။ စာစီစာကုံး (၃) ခုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ပညာသင်ဆုလင့်ခ်ကိုသွားပါ။
ထောက်ခံစာ ၂ ခု - အနည်းဆုံးစာတစ်စောင်သည်သင်၏ကျောင်းရှိဆရာသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ထံမှဖြစ်ရမည်။ ဒါ့အပြင်ထောက်ခံစာ၏အက္ခရာများမူရင်းဖြစ်သင့်သည်နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းထောက်ခံချက်အက္ခရာများ၏မိတ္တူများမဖြစ်သင့်။ ဆွေမျိုးများကိုကိုးကားရန်မထည့်ပါနှင့်။
လျှောက်လွှာပုံစံအပြည့်အစုံ - ထို့အပြင်လျှောက်လွှာပုံစံတစ်ခုလုံးကိုဤစာမျက်နှာ၏အဆုံးတွင်ဖြည့်ပါ။ ဒါ့အပြင်သတင်းအချက်အလက်များကိုရိုက် နှိပ်၍ သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းစွာပုံနှိပ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်လုပ်နိုင်သည် Microsoft မသန်စွမ်းပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာကိုဤနေရာတွင် download လုပ်ပါ.
သင်မှတ်မိရန်အရေးကြီးသည်။ အထက်ပါများအားလုံးကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]။ သင်၏လျှောက်လွှာတွင်ပါရှိသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးမပို့မီသေချာပါစေ။
မူရင်း application packet မှသီးခြားပေးပို့သောနောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများကို Microsoft ကလက်မခံပါ။ ထို့အပြင်ပြည့်စုံသော application packets များကိုသာပြန်လည်သုံးသပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မသန်စွမ်းပညာသင်ဆုကိုလက်ခံရန်ရွေးချယ်ထားသူများအားtheပြီလကုန်တွင်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
ဤပညာသင်ဆုနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအနက်အချို့မှာ -
၂။ ကျွန်ုပ်သည်ယူအက်စ်ရှိကျောင်း (ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်စသည်) ကိုသွားရန်လိုအပ်ပါသလား။
မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်၊ သင် USA တွင်ဖြစ်စေ၊ သင်တက်ရောက်သည့်ကျောင်းတွင်ငွေကြေးဆိုင်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်အမေရိကန်နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိရမည်။ ဒါ့အပြင်သင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] အမေရိကန်မဟုတ်သောကျောင်းများ၏အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုကိုစစ်ဆေးရန်။
၃။ ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ရပ်ရွာကောလိပ်ကိုကျွန်ုပ်တက်နိုင်ပါသလား။
1601 ပဉ္စမရိပ်သာ, Suite 1900
ဟုတ်တယ်။ ထို့အပြင်ဆုလက်ခံရရှိသူများသည်စာသင်နှစ်အတွက်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ နှင့် $ 5,000 စုစုပေါင်းဆုအထိ။
၆။ ဤပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပညာသင်ဆုနှင့်ဆက်နွှယ်သောအလုပ်သင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြား Microsoft Event အစီအစဉ်ရှိပါသလား။
ဒီအချိန်မှာမဟုတ်ဘူး သို့သော်ရန်ပုံငွေကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ Microsoft သည်ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်ရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အထက်ပါသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင်လိုအပ်သောအရေးကြီးသောအချက်အလက်များဖြစ်သည် ပညာတတ်။ လျှောက်ထားသူများဖြည့်ဆည်းရမည့်လိုအပ်ချက်များရှိနေသေးသော်လည်းသို့သော်ကျွန်ုပ်နှင့်သဘောတူပါလိမ့်မည်။
လျှောက်ထားရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကိုဆန့်ကျင်ရန်အခွင့်အရေးရရန်ယခုပြုလုပ်ပါ။ သို့သော်ပိုမိုသိရှိလိုပါကပညာသင်ဆုဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ဒါ့အပြင်သင်ဤဝဘ်စာမျက်နှာကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလူများစုဆောင်းမှု Portal 2020 | www.productivepeople.org
NOUN ဘွဲ့လွန်အတိတ်မေးခွန်းများ 2021 & အဖြေများ PDF ကို download
NSCDC သည် ၂၀၀၀-၂၀၂၀ အားပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်အစိုင်အခဲသတ္တုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများကိုထူထောင်သည်
နိုင်ဂျီးရီးယား၏သမ္မာကျမ်းစာလူ့အဖွဲ့အစည်း ၂၀၂၀ | www.biblesociety-nigeria.org
နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရာတွင်သုံးစွဲသူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကဏ္ole
« Portal Form ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအတွက် ၂၀၂၁ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးသောပညာသင်ဆု
JAMB CBT App 2021 အခမဲ့နှင့်လက်တွေ့လမ်းညွှန်များအတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်းကိုကြည့်ပါ »